ကျနော်လေးစားမိသော မိန်းမလျာတဦး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျနော်လေးစားမိသော မိန်းမလျာတဦး
Posted by Good Idea on Sep 8, 2010 in Creative Writing, Short Story | 17 comments
ကျနော်တို့ ပြည်မြို့မှာ ကိုမောင်ကြီး ဆိုတဲ့ မိန်းမလျာတဦး (အခြောက်) ရှိတယ်။ သူက အလှပြင်တယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာ ပန်းအလှထိုးတယ်။ ပဒေသာကပွဲ ကတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန် သူ့မိဘအလုပ်ဖြစ်တဲ့ ငါးပိ ငံပြာရည်ရောင်းတဲ့ အလုပ်ကို ကူတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ အလှပြင်ပါတယ်။
ကိုမောင်ကြီးက အလှပြင်ရင် စေတနာပါပါနဲ့ လုပ်ပေးလေ့ရှိတော့ ဘွဲ့ယူမယ့်လူတွေ မင်္ဂလာဆောင်မယ့်လူတွေက သူ့ဆီမှာပဲ အလှပြင်ချင်ကြတယ်။ ပြည်တက္ကသိုလ်မှာ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ရှိတဲ့လဆိုရင် သူ့ဆီကို ဟိုင်းလတ်ကား ၄ ၊ ၅ စီးနဲ့ ဘွဲ့ယူမယ့် ကောင်မလေးတွေ လာပြီးအလှပြင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ၀င်ငွေ တအားဖြောင့်တယ်။
ဒါပေမယ့် သူရတဲ့ငွေနဲ့ မိဘကို လုပ်ကျွေးတယ်။ အလှူအတန်း ရက်ရောတယ်။ မူလတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို စုပေါင်းရှင်ပြုပေးတဲ့အခါ သူက အခမဲ့ အလှပြင်ပေးတယ်။
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နေ့ဆို မိန်းကလေးလို ၀တ်စားပြီးတော့ ပဒေသာကပွဲ ကတယ်။ ကျနော်တို့လည်း အားပေးကြပါတယ်။ သူပွဲကပြီး နောက်တနေ့ ဈေးထဲလာတဲ့အခါ ဈေးသည်အမျိုးသမီးတွေက “မောင်ကြီးရယ်။ နင်မနေ့က ပြင်တာများ သိပ်လှတာပဲ။ အ၀တ်ကလေးနဲ့ သိပ်လိုက်တယ်”လို့ ပြောရင် သူ့မှာ ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ ပီတိဖြစ်လို့ မဆုံးတော့ဘူး။
ရပ်ကွက်ထဲမှာ သူ့ကို အခြောက်ဆိုပြီး ဘယ်သူမှ မနှိမ်ရဲဘူး။ မစရဲဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက ဘယ်သူနဲ့မှ ဇာတ်လမ်းမရှုပ်ဘူး။ ဘယ်ယောက်ျားကိုမှလည်း မျက်စမပြစ်ဘူး။ သူ့ကို အထင်သေးတဲ့ပုံစံနဲ့ စနောက်ရင်လည်း လုံးဝ မခံဘူး။ အများအားဖြင့်လည်း သူ့ကို မစရဲကြပါဘူး။ အနေအထိုင် တည်ကြည်လို့လေ။
သူဈေးဝယ်တဲ့အခါလည်း ဘယ်သူကမှ သူ့ကို မိန်းကလေးအသုံးအနှုန်း “အစ်မ၊ ညီမ” မခေါ်ကြဘူး။ ခေါ်ရင်လည်း မကြိုက်ဘူး။ ကိုမောင်ကြီးလို့ ခေါ်မှ ကြိုက်တယ်။ ပြောချင်တာက သူ့ဘ၀ကို သူသိတယ်။ ရိုးရိုးသားသား နေတယ်။ တတ်တဲ့ပညာနဲ့ ကုသိုလ်ဒါန လုပ်တယ်။ မိဘကို လုပ်ကျွေးတယ်။ သူဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေဘူး။ သူ့ကြောင့် သူ့မိဘတွေ သိက္ခာ မကျတဲ့အပြင် ဂုဏ်ယူနေရတယ်။ “သူ့ခမျာ အတိတ်ကံမကောင်းခဲ့လို့ စိတ်တွေတမျိုးဖြစ်ပေမယ့် လိမ္မာရှာတယ်” လို့ ပတ်ဝန်းကျင်က ချီးကျူးကြတယ်။
ပစ်မှတ်ကို တည့်တည့်ထိမယ့် စကားမျိုး ပြောရမယ်ဆိုရင် “အခြောက်က အခြောက်လို နေတယ်” ပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုပြောလို့ လူအချင်းချင်း ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်။ ရင့်သီးတယ်လို့ မထင်စေချင်ဘူး။ တကယ်ပြောတာ။ အခြောက်က အခြောက်လိုနေရင် အခြောက်သိက္ခာရှိတယ်။ အဲဒီ သိက္ခာကပဲ သူတို့ဘ၀အတွက် လောကကြီးမှာ အသက်ရှူနိုင်ဖို့ နှာခေါင်းပေါက်တခုသဖွယ် ဖြစ်သွားတယ်။
၀ဋ်ကြွေးကြောင့် ပြောပြော၊ စိတ်ကြောင့် ဆိုဆို သူကိုယ်တိုင်ကိုက မိန်းမဘ၀လိုနေချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိနေတာကို ပြင်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ လက်ခံလိုက်ရတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာ့လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း ဒီလောက်တော့ နားလည်လက်ခံကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပြဿနာ မရှိသေးဘူး။
ပြဿနာက ဘယ်မှာရှိလာသလဲ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကိုယ့်ဘ၀ အခြေအနေကို မေ့သွားပြီး လိင်တူချင်း ကြင်ဖော်ယောက်ျားရှာတော့မှ လိုင်းတွေပူးကုန်တော့မှ ရှော့ခ်တွေ ဖြစ်ကုန်တော့တာ။ သူ့ကို ဘယ်သူများ ကြိုက်ချင်ကြမလဲဆိုပြီး ဟိုလူ့မျက်စပြစ်။ ဒီလူ့မျက်စပြစ်နဲ့ ဖြစ်ကုန်ရော။ အဲဒီမှာတင် မရှိမဲ့ရှိမဲ့ အခြောက်သိက္ခာ လေးလည်း လေနဲ့အတူ လွင့်ပါသွားတော့တာပဲ။
ယောက်ျားလေးတချို့ကလည်း ပိုက်ဆံရှားတဲ့ ခေတ်ကြီးဆိုတော့ ငွေထောတဲ့ အခြောက်တွေက သူတို့ရဲ့ ပစ်ကွင်းတွေ ဖြစ်သွားတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ငွေလိုချင်တဲ့ သကောင့်သားနဲ့ ဘဲလိုချင်တဲ့ အခြောက်များ တွဲကြလေးသတည်းပေါ့။
ကျနော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အခြောက်နဲ့တွဲပြီး ငွေချူစားနေတဲ့ကောင်တွေ တွေ့ဖူးပါရဲ့။ တချို့များဆို ငွေယူတဲ့အပြင် အ၀တ်အစား၊ အသုံးအဆောင်ကအစ၊ ဆိုင်ကယ်အဆုံး ၀ယ်ခိုင်းသဗျ။ သကောင့်သားတွေက အဲဒီ အ၀တ်အစား အသုံးအဆောင်တွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေ အရင်းပြုပြီးတော့ ကောင်မလေးချောချောတွေကို ပြန်လိုက်ကြတယ်။
အခြောက်တွေအတွက်ကလည်း ငွေကုန်ပေမယ့် ကိုယ့်ဘဲလေးက ငယ်ငယ်ချောချောလေးဆိုရင် သူတို့လောကသား အချင်းချင်းထဲမှာ မျက်နှာပွင့်သဗျ။ ပညာသာတတ်လို့ကတော့ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင်ဖြစ်အောင်ကို ကြွားစရာ၊ ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။
တွဲတယ်ဆိုတာကလည်း စကားလုံးလှအောင်သာ သုံးရတာပါ။ အခြောက်တွေက ပျော်ရွှင်မှုကို ယောက်ျားတွေဆီက ငွေနဲ့ပေးဝယ်ပြီး အပျော်ယောက်ျား ယူလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။ ကိုကိုတွေကလည်း သိတယ်လေ။ သူတို့ငွေတွင်းကြီးကို စိတ်ကျေနပ်အောင် အလိုရှိသမျှ စိတ်ဆန္ဒတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးရတာပေါ့။ ဒါမှလည်း စပွန်ဆာပြုတ်မသွားမှာလေ။
ကျနော်တို့ ဈေးအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲကဘဲ အခြောက်နဲ့တွဲပြီး ထောနေတဲ့ကောင်တကောင်နဲ့ စကားစပ်လို့ မေးကြည့်ဖြစ်တယ်။
“မင်းဘာလို့ ဒီအခြောက်နဲ့ တွဲနေတာလဲ”
“ဒါဖြင့် မင်း သူ့ကို ချစ်သလား။”။ ဒီမေးခွန်းက တမင်ကို မေးတာပါ။ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဘာတွေရှိမလဲ သိချင်လို့ကို မေးလိုက်တာ။
ကျနော့်စကားကြောင့် ဒီကောင် ကျွဲမြှီးတိုသွားတယ်။
“ဟ ယောက်ကျားချင်း ဘယ်လိုလုပ် ချစ်နိုင်ပါ့မလဲ။”
“ငါပြောပြီးပါပကော။ ငါ့အတွက် အကျိုးရှိလို့ပါဆို။ ဘယ်လိုအကျိုးရှိသလဲ။ မင်းစောင့်ကြည့်လိုက်။ မကြာခင် သိရလိမ့်မယ်”
သိပ်မကြာပါဘူး။ အခြောက်ဆီက ရထားတဲ့ အရင်းအနှီးလေးနဲ့ ကြိုးစားလိုက်တာ နယ်မြို့တခုက ဆန်ကုန်သည် သမီးနဲ့ ညားသွားပါလေရော။ သူ့ရဲ့ စပွန်ဆာအခြောက်ကြီးလည်း ရင်ဘတ်စည်တီးပြီး ငိုကြီးချက်မနဲ့ပေါ့ဗျာ။
အခြောက်တွေဟာ ဒီဘဲလေးကို စပွန်ဆာပေးပြီးတွဲနေပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ တနေ့နေ့ ဒီကောင်ငါ့ကို ခွာလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကြိုတွေးမိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒီလောက် မတုံးအလောက်ပါဘူး။ ဒါဆို ဘာလို့ အပေါ်က ဇာတ်လမ်းမျိုး ဖြစ်လာသလဲ။ ပစ္စပ္ပုန်ကာလရဲ့ သာယာပျော်ရွှင်မှုကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးမခံနိုင်တဲ့အတွက်လို့ ကောက်ချက်ချပြီး ပြောရမှာမဲ။
ကျနော် မြင်တွေ့သမျှပြောရရင် စပွန်ဆာပေးနိုင်သူ အခြောက်များ ဘဲနဲ့တွဲနိုင်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံများမရှိလို့ကတော့ ပုံမှန် ယောက်ျားစိတ်ပေါက်နေတဲ့ ငွေမက်သူ ကိုကိုယောက်ျားများရဲ့ အနားတောင် ကပ်လို့ရမယ် မထင်ပါဘူး။
ဒီလိုဇာတ်လမ်းတွေပြောပြလို့ “ဟွန်း ယောက်ျားတွေများ အခြောက်တောင် ချူစားရဲသေးပါ့” ဆိုပြီး ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ မရမ်းစေချင်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နာမည်အပျက်ခံ ငွေရပြီးရောဆိုပြီး အခြောက်နဲ့တွဲတဲ့ ယောက်ျားမျိုးက လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်။ အများစုကတော့ အဲဒါမျိုးကို ဝေါင်ဝေါင်ရှေး၊ ဝေးဝေးရှောင် ကြတဲ့အပြင် အဲဒီလို လူမျိုးတွေကို အထင်သေး၊ နှာခေါင်းရှုံ့ကြပါတယ်။
ကိုမောင်ကြီးက ဒါမျိုးဇာတ်လမ်းတွေ နားလည်ထားပုံရပါတယ်။ သူ့ကို ချူချင်လို့ ဇာတ်လမ်းစတာမျိုးတောင် လက်မခံပဲ သူဖြစ်ချင်တဲ့ မိန်းကလေးလို အနေအထားဘ၀မှာ အေးအေးနေတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဖြစ်နိုင်တာကို လုပ်တယ်။ ဖြစ်နိုင်တာက ဘာလဲ။ သူဟာ ယောက်ျားလေးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းမလို နေချင်စိတ် ပေါက်နေတဲ့အတွက် မိန်းကလေးလိုနေတယ်။ ဒါက ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာ ဖြစ်တယ်။
ကိုမောင်ကြီးဟာ မဖြစ်နိုင်တာကို မလုပ်ပါဘူး။ မဖြစ်နိုင်တာက ဘာလဲ။ မိန်းမလို ၀တ်စားနေထိုင်တဲ့အတွက် သဘာဝက ပေးအပ်လိုက်တဲ့ မိန်းမဘ၀ကို ရရှိထားသူတွေလို ယောက်ျားယူဖို့ဆိုတာကတော့ တကယ် ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သူသိတယ်။ လက်ခံထားတယ်။
ဘာကြောင့် မဖြစ်နိုင်သလဲ။ သူဟာ မိန်းမယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ယောက်ျားဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ယောက်ျားဖြစ်ပြီး ယောက်ျားယူတာကို ပတ်ဝန်းကျင်က လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါ့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အဆိပ်အတောက် မဖြစ်အောင် နေလာခဲ့တဲ့ သူ့သိက္ခာ၊ သူ့မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မ ဆွေမျိုးအသိုင်းဝိုင်းရဲ့ သိက္ခာ ဒါတွေကို ခဏတာ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ လဲလှယ် မ၀ယ်ယူသင့်ဘူးဆိုတာ သူကောင်းကောင်း သဘောပေါက်ထားတယ်။
ဒါတွေကို သိနားလည်ပြီး သူနေချင်တဲ့ ဘ၀မှာ၊ သူလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အဆိပ်အတောက် မဖြစ်စေဘဲ အသက်ရှင်နေတဲ့သူ့ကို ကျနော်လေးစားမိတာ အဆန်းတကြယ်များ ဖြစ်နေမလားဗျာ။
အခုတင်တဲ့ အတွေးအမြင်အယူအဆနဲ့ ထင်မြင်ချက်များ ကောင်းပါတယ်။ လူသဘာဝနဲ့ လူတွေစိတ် နားလည်အောင် ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးလေးလို့လည်း မြင်မိပါတယ်။
ခုလို ဖတ်ရှု ဝေဖန်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ….
တော်တော်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်တခုပါပဲဗျို့။ စကားမစပ် ရူးနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ သူတို့ကို မကောင်းပြောတာ ရူးတာလို့ပြောလို့ သေချာအောင်မေးရတာပါ၊ ချိတ်မချိုးပါနဲ့။
အမေရိကားမှာ အဖိနှိပ်ခံလူမည်းတွေဟာ သူတို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ပြည်တွင်းစစ်ကစလို့ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ အဖြူတွေနဲ့ တန်းတူနေရာယူ ပြခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်က လိင်တူဆက်ဆံသူ ချစ်ညီအကိုများ အဲယောင်လို့ ချစ်ညီမ၊အမများလည်း မိမိတို့နဲ့ ထိုက်တန်ကြောင်း နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ အချိန်ယူပြီး အစွမ်းအစပြ၊ အနစ်နာခံ ပြကြပါ။ နောက်တော့ ကိုယ်ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာ ကို စိန်ခေါ်ကြပါလား။
လိင်တူဆက်ဆံသူတွေ စိတ်ဆန္ဒသောင်းကျန်းတာတော့ ဖိုကြီးဝါဒထွန်းကားတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ယောက်ျားကိုယ်နဲ့ မိန်းမစိတ်တွဲမိလို့ထင်ပါတယ်။
အဲဒါမျိုးကို အခြောက်အပျို ( စစ်၊ မစစ်တော့မသိဘူးလေ ) လို့ခေါ်တယ်။
တစ်နည်း အခြောက်ကောင်း ( မိန်းမကောင်း လို့သုံးသလိုမျိုးပေါ့လေ ) လို့လည်းခေါ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
အခြောက်တိုင်း သောင်းကျန်းပြီး စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာမဟုတ်မှန်းသိပါတယ်။
အခြောက်တွေနေရာယူပြမလုပ်နဲ့လေ၊ နေရာယူပြီးလို့ ပြုတ်တောင်ပြုတ်သွားပြီလေ။
သူကောင်းစားလို့ မြှောက်စားတော့ ဝန်ကြီးအဆင့်တစ်ယောက်၊ ဒုဝန်ကြီးအဆင့် နှစ်ယောက်တောင်ရှိလိုက်သေးတယ်။ အခြောက်ကြီးမွေးစားထားတာတစ်ယောက်က အခုထိ ရာထူးလက်ရှိ။ ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ချုပ်ချုပ်လုပ်နေတာလေ။ အခြောက်တွေနေရာရလာရင် အဲသလို မျက်နှာလိုက် သူတို့လင်ကို ပစားပေး စိတ်ပျက်စရာပါ။
မြှောက်မပေးပါနဲ့ ဘစ်ကတ် ရယ်။
အာဏာ ရသူတွေဟာ ကိုယ်နဲ့ နီးစပ်ရာကို ပဲပစားပေးပြီး ဆွေမျိုး ကောင်းစားရေးအတွက် ကြံကြတာ ဖွံ့ ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စပါ။ မြန်မာပြည်မှာ မှမဟုတ်ပဲ ဗီယက်နမ်၊ ကဗ္မောဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား စတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကျင့်ဝတ်ပိုင်း အားနည်းနေသေးတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဖြစ်နေတာ တွေ့ နိုင်ပါတယ်။ ကျား၊မ၊ အစို၊ အခြောက်ဖြစ်တာ နဲ့ မဆိုင်ပါ။ လင်ကို ပစားပေးတဲ့ အခြောက်တစ်ယောက်ရှိမယ် ဆိုရင်၊ နီးစပ်ရာ သား၊ မြေး၊ တူ၊ သူငယ်ချင်း ကို နေရာပေးထားတဲ့ မခြောက်သူ ကျားမ အရာရှိတွေက ဆယ်ယောက် မက ရှိနေပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း သူတို့က လူများစု ဖြစ်နေတော့ သူတို့ လုပ်ရင် စီးပွားရေးကျပ်တည်းလို့၊ နိုင်ငံရေးအခြေအနေမကောင်းလို့ စသည်ဖြင့် နားလည်ပေးကြပြီး၊ အခြောက်တစ်ယောက် လုပ်ရင်တော့ ကမ္ဘာ့ သတင်းထူးကြီးတစ်ခုလို မြိန်ရည်ယှက်ရည် ပြောကြရေးကြပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သူတိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက်၊ မိသားစုအတွက် ဘာတွေ လုပ်ပေးခဲ့သလဲ ဆိုတာနဲ့ ပဲ တိုင်းတာကြပါ။
သူဘယ်သူနဲ့ အိပ်သလဲ ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ မတိုင်းပါနဲ့။ ဒါက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပါ။
Personal ကိစ္စကို ထည့်မတွက်ပဲ ဘေးဖယ်ထားတဲ့ နိုင်ငံထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ မပါပါဘူး သူငယ်ချင်း။ ဥပမာ – ကျနော်က ဘုရားတည်၊ ကျောင်းဆောက်၊ ရပ်ရွာမှာ ရေကန်တွေတူး၊ ကောင်းမှုတွေ လယ်လောက်ပဲ လုပ်လုပ် ကွယ်ရာမှာ နောက်မိန်းမယူ၊ အငယ်ထား၊ အဲ့လို လိင်မှုကိစ္စတွေ ဇာတ်လမ်းရှုပ်ရင် ဘယ်သူကမှ ကျနော့်အပေါ် လေးစားကြမယ် မထင်ပါ။
ဒီလူကြီးက စိတ်ထားကောင်းတယ်။ ရက်ရောတယ်။ ဒါပေမယ့် နှာဘူးကြီးလို့ အပြောခံရမပေါ့ဗျာ။ မဟုတ်ဘူးလား
ခြောက်ချင်သူကလည်း သူဘာသာသူ သူ့သဘောအတိုင်းခြောက်။
အခြောက်ကိုမှ စပွန်ဆာပေးချင်သူ တွင်းတ်ိမ် တူးချင်သူကလဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တူး။
ဒါပေမမယ့် အခြောက်ဖြစ်ရတာကောင်းတယ်လို့ လဲ စာမဖွဲ့ချင်ပါနဲ့။
ကောင်းတယ်လို့ ကိုယ်ထင်တာကို လဲ လူပုံအလည်မကြေငြာပါနဲ့။
စလောင်းဖုံးနဲ့ ကြံချောင်း အမှန်အကန်ပေါင်းမှ ကြံဖုံးလေးတွေဖြစ်လာမှာမို့ပါ။
ကိုပေါက်အတွေးကို တရုတ်ပြည်မက အစိုးရကြားရင်… လူတွေဂေးဇတ်သွင်းချင်သွားဦးမယ်..။
လိင်ကိစ္စတွေက လူယဉ်ကျေးမှုမှာ လျို့ ဝှက်ရပါတယ်.။ ဒါမှတန်ဖိုးရှိမှာကိုး..။
ဂေးတွေ.. .အထူးသဖြင့် မြန်မာဂေးတွေက ဒိကိစ္စကို စည်းသိပ်ထားဟန်မရှိပါဘူး.။
ဒီအလေ့အကျင့်က .. မြန်မာ့လူအသိုင်းအ၀ိုင်းကနေ ဂေးတွေကို ဆွဲချသွားတယ်လို့.. သုံးသပ်မိပါတယ်.။
ယောက်ျားက မိန်းမကို ကြိုက်နှစ်သက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် .. မိန်းမက ယောက်ျားကို ကြိုက်နှစ်သက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် .. အတင်းကြီး မလုပ်ရပါဘူး..။ လိင်ကိစ္စလည်း ရှေ့ အတင်းမတင်ရပါဘူး..။
အတင်းကြီးလည်း မြူဆွယ်တာ မလုပ်ရပါဘူး..။ ပွင့်လင်းတယ်ဆိုပြီးလည်း အောက်ပိုင်းကိစ္စကကို မတက်ပဲ ..လျှောက်ပြောနေလို့ မဖြစ်ပါဘူး..။
ဒါကို မြန်မာဂေးလောကက စည်းကျော်တဲ့အခါ ..အခုလို ..အများစုက မုန်းတီးရွံ ရှာတဲ့ဖက် ..ကူးသွားတော့တယ်လို့.. ထင်မိပါတယ်…။
ဂေးဆိုတာ .. သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုရင် ကျား၊မတွေလိုပဲ..သဘာဝအတိုင်းပဲ .. ဆက်ဆံပြုမှုကြတာကောင်းတယ်လို့ .. ထင်ကြောင်းပါ..။ လိင်တူချစ်တယ်ဆိုပြိး ..တွေ့သမျှလိင်တူတွေ လျှောက်ချစ်ပြမနေစေလိုပါ..။ တယောက်ဆိုတယောက် .. ပိတောက်ဆိုပိတောက်..လိုနေပါ..။ တည်တည်တန့်တန့် နေပါ..။
အင်း တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက် တစ်နေ့ကိုတစ်ယောက် လေ :D
္ပကျနော်ကတော့ဘယ်အချောက်ကိုမှအထင်မကြီးပါဘူး မြင်ဘူးကြားဘူးနေတော့ ရွံစရာတွေလို့ပဲခံစားမိပါတယ် ကိုခိုင်ပြောသလိုလျှို့ ဝှက်တတ်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပါ ခုတော့ဒင်းတို့က စားထာသမျှကြွားစရာတစ်ခုလို အရသာခံပီးပုံပြောသလို ပြန်ပြန်ပြောတတ်တာကဆိုးလွန်းပါတယ် မြန်မာမှာဆိုရင် နာမည်ကြီးကျူရှင်ဆရာနဲ့ ဆယ်တန်းကျောင်းသား၊ ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေနဲ့ cosmetic ကုမ္မဏီဝန်ထမ်း၊ beauty saloon ဝန်ထမ်းနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက ကောင်လေးတွေ နေရာစုံမှာ ပုံစံစုံတယ် လူကောင်းသူကောင်းဆိုရင် ကြည့်ကျက်သာရှောင်ရှားရတယ် ဝလကလ ပဲ။
ကျနော်တို့အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀က မဟာဗန္ဒုလ ပန်းခြံမှာကျောင်းပြေးပြီးထိုင်နေတုန်း ပန်းခြံထောင့်က ဧမာနွေလမှာ church လာတက်တဲ့ ဘဲကြီးတစ်ပွေ လာရောတာ ကိုယ်တွေက ချာတိတ်ဆိုတော့ ရိုးရိုးမိတ်ဆွေထင်မိတယ်ပေါ့။
နောက်တော့မှ phyo လိုကောင်မျိုးဖြစ်နေတာကိုးဗျ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သု့ဘ၀ကံကြောင့်ဖြစ်တာကိုတော့ မနှိမ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ သူတို့အမြီးပြတ်တိုင်း သူများတွေကို အမြီးပြတ်အောင် ဇာတ်သွင်းတာတော့ ဆိုးတယ်ဗျာ။
ခုpost လေးကိုဖတ်ရတာတော့ အဲဒီလို အခြောက်ကိုတော့တော်တော် လေးစားမိတယ်။
ဦးမောင်ကြီး ဆိုတဲ့အခြောက်က တစ်ကယ်လေးစားစရာပါ။ အရင်ဘ၀က ကျူးလွန်မိခဲ့တဲ့ ကာမေသုမစ္ဆာစာရကံရဲ. အကျိုးဆက်ကြောင့် ဒီဘ၀မှာ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်ဖြစ်နေပေမဲ့လဲ သူ.မှာ သူတော်ကောင်းစိတ်ဓါတ်အခံ ပါလာပီးသား။ သူ.ဘ၀သူကောင်းကောင်းနားလည်တရ်။ ဒီကံကြမ္မာဆိုးကို ဘယ်လို ကျော်လွှားရမလဲသူသိတရ်။ သိတဲ့အတိုင်းလဲ မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်တရ်။ အဲဒါကြောင့်မို. သူက လေးစားစရာဖြစ်လာတာပေါ့။ အာဖျံကွီးလဲ ဖတ်ရင်းနဲ. တော်တော်လေးစားမိပါတရ်။ တစ်ကယ်တန်းလောကကြီးမှာ ပုံမှန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေသည့်တိုင် သူ.လိုကောင်းတဲ့လူတွေ ပေါမှမပေါတာပဲလေ။ ဒီပိုစ့်လေးကိုကြိုက်ပါတရ်၊ ကျေးဇူးပါ Good Idea ရေ။ လူတစ်ယောက် သူ.ရဲ.ဘ၀ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လျှောက်ရင် ကြီးမားတဲ့ အားနည်းချက် သူ.မှာရှိနေရင်တောင် လက်ခုတ်တီးအားပေးရမှာပေါ့။
မှော်စရာရဲ့ရာရား အကြောင်း ဖတ်မိရင်း နဲ့မှ ဒီပို့စ် တွေ့မိတယ်
ိကိုမောင်ကြီးကလဲ လေးစားစရာ ကောင်းပါတယ် ၊ ရွာထဲက မဖတ်ရသေးသူတွေ ဖတ်ရအောင် ၊ ဖြိုးတို့အဖွဲ့တွေ အတုယူရအောင် ပြန်မန်းပေးလိုက်ပါတယ်
ဂွတ်အိုင်ဒီယာ ရဲ့ PM ထဲကို ကိုမောင်ကြီး လိပ်စာလှမ်းမေးတဲ့ မေးလ်တွေ
အဖြေပြန်မပေးမချင်း ဆက်တိုက်ဝင်လာမှာ မြင်နေမိတယ်ဗျို့ 
kai says: လိင်ကိစ္စတွေက လူယဉ်ကျေးမှုမှာ လျို့ ဝှက်ရပါတယ်.။ ဒါမှတန်ဖိုးရှိမှာကိုး..။
သူကြီး ပြောတာ သဘာဝကျတယ်ဗျ…။ ဗမာပြည်က ဂေး တော်တော်များများက မဲမဲမြင်ရာ သူ့တို့ ပါတနာလို ကလိနေကြတော့ ၊ စည်းလွတ် ၀ါးလွတ်ဆိုတော့ကာ အများစုက လက်မခံချင်စရာတွေ ဖြစ်ကုန်ရော။ Good Idea ပို့စ်ထဲကလို ဂေးတွေကို ကပ်ပေါင်းနေတဲ့ကောင်တွေကလဲ သူတို့အကြံနဲ့ သူတို့။ တစ်ချို့ကြတော့ ဂေးတွေနဲ့ ပေါင်းရင်း သူတို့ပါ “အင်ဂလန်” တွေဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားဖူးတယ်။
ကျနော်သိတာတော့ ဂေး ၄မျိုး ရှိပါသတဲ့ ….
ဆြာဝန်တယောက်မို့ဆေးပညာအရာရော psychology အရပါ သိထားတဲ့
အစ်မမို့ …ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါကြောင်း …